कसरी मेरो फेसबुक ईमेल परिवर्तन गर्न? ➡️ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
12 सक्छ, 20210टिप्पणी 445
इ-मेल ठेगाना जुन फेसबुकसँग आबद्ध हुन्छ, यसले सामाजिक नेटवर्कको धेरै कार्यहरूमा असर गर्छ, उदाहरणका लागि तपाईले भनेको ईमेल मार्फत सूचनाहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। भाग्यवस, फेसबुकले तपाईंलाई कुनै पनि समयमा यो ठेगाना परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ, ताकि तिनीहरूले यो अन्तहीन कार्य गर्न सक्दछन्। तपाइँको फेसबुक ईमेल परिवर्तन गर्न को लागी प्रक्रिया धेरै सरल छ र कहिँ बाट पनि गर्न सकिन्छ।
फेसबुकमा ईमेल ठेगाना परिवर्तन गर्नुहोस् कसरी यो गर्ने?
सामाजिक नेटवर्कमा ईमेल र सेल फोन नम्बर जस्ता जानकारीको लगातार अपडेट गर्नु वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यी चीजहरू सक्षम हुनको लागि आवश्यक छ। खाताहरू पहुँच गर्नुहोस्, सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहोस्, पासवर्डहरू रिकभर गर्नुहोस्, अन्य चीजहरूको बीचमा।
भाग्यवस, ईमेल ठेगाना परिवर्तन गर्नुहोस् जुन फेसबुक खातासँग आबद्ध छ प्रक्रिया होइन जुन धेरै काम गर्छ, किनकि उही हो कार्यान्वयन गर्न सजिलो प्रकाशन को संपादन बनाउँदा वा केवल एक टिप्पणी पोस्ट गर्नुहोस्। मुख्यले ईमेल ठेगानालाई अपडेट गर्नको लागि निम्न तरीकाले प्रक्रियाको व्याख्या गर्नेछ।
तपाईंको खाताको प्राथमिक ईमेल परिवर्तन गर्नका लागि चरणहरू
सबै भन्दा पहिले, तपाईं सामान्य रूपमा फेसबुक मा लगइन गर्न पर्छ। त्यसो भए तपाईले होम स्क्रिनको माथि अवस्थित मेनू बारमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यसो भए पछि प्रेस गर्न तपाईंले "कन्फिगरेसन" थिच्नु पर्छ "खाता सेटिंग्स उत्पन्न गर्नुहोस्"। "सम्पर्क" सेक्सन विशेष रूपमा अवस्थित हुनुपर्दछ।
एक चोटि यो काम सकिसकेपछि तपाईले "अर्को ईमेल ठेगाना वा सेल फोन नम्बर थप्न" थिच्नु पर्छ। अब सामग्री बक्समा जुन पप अप हुन्छ, नयाँ ईमेल ठेगाना प्रविष्टि गर्नुपर्दछ। विशेष गरी लाइनमा जो "नयाँ ईमेल" भन्छ, एक पटक भयो र पुष्टि भयो कि तपाईंले "add" मा क्लिक गर्नुपर्नेछ।
यससँग तपाईले एउटा ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ, पहिले प्रदान गरिएको ठेगानामा। तपाईंले खोल्नै पर्छ र लिंकमा जानु पर्छ जुन त्यहाँ देखा पर्दछ वा फेसबुक स्क्रिनमा कोड लेख्नुहोस्। एकचोटी यो काम सकिसकेपछि तपाईले "परिवर्तन बचत गर्नुहोस्" थिच्नु पर्छ। यदि ठेगाना अझै सेट गरिएको छ भने, यो आवश्यक छ "मुख्यको रूपमा सेट" थिच्नुहोस् र अन्य मेटाउनुहोस्।
तपाईको इ-मेल ठेगानालाई फेसबुकमा अप टु डेट राख्नुका फाइदाहरू
यसलाई स्पष्ट पार्नका लागि ईमेल ठेगाना अप टु डेट राख्नु वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ, मुख्य कारण यो हो कि यस कारण खाता पूर्ण रूपमा सम्झौता गरिएको छ। पासवर्डको निरन्तर परिवर्तन र जानकारी को अपडेट, खाता चोरी वा ह्याकि prevented रोक्नको लागि अनुमति दिन्छ।
थप रूपमा, फेसबुकसँग प्लेटफर्मको साथ दुई ईमेल खाताहरू सम्बद्धको विकल्प छ, जसले दुबै सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्दछ र खातामा सबै ठीक छ भनेर महसुस गर्न सक्दछ। के यो सुरक्षा को मामला मा एकदम उपयोगी छ र सोशल मिडियामा के हुँदैछ निगरानी गर्दै।
थप रूपमा, यसो गर्न केहि मिनेटहरू लिन्छन् र तपाईं देख्न सक्ने जटिल छैन। एक अतिरिक्त सिफारिशको रूपमा, यो भन्न सकिन्छ थपिएको ईमेल निजी र व्यक्तिगत हुनुपर्दछ, यदि सम्भव छ भने, यो खाता मालिक बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन, त्यसैले अधिकतम सुरक्षा राखिन्छ।
1 फेसबुकमा ईमेल ठेगाना परिवर्तन गर्नुहोस् कसरी यो गर्ने?
2 तपाईंको खाताको प्राथमिक ईमेल परिवर्तन गर्नका लागि चरणहरू
3 तपाईको इ-मेल ठेगानालाई फेसबुकमा अप टु डेट राख्नुका फाइदाहरू